दाइको न्यायको लागि सामाजिक संजालमा यतिबेला खुलेरै लाग्ने यी हुन् श्री एयरलाइन्सकि पाइलट दुर्गा! (हेर्नुस् तस्विरहरू) – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > दाइको न्यायको लागि सामाजिक संजालमा यतिबेला खुलेरै लाग्ने यी हुन् श्री एयरलाइन्सकि पाइलट दुर्गा! (हेर्नुस् तस्विरहरू)
admin February 23, 2021 February 23, 2021 जीवनशैली, समाचार	0
पथरी। मोरङको उर्लाबारी–५ का ३१ वर्षीय प्रवीण बास्तोलाको शङ्कास्पद मृत्यु प्रकरणको मिसिलमा अर्कै व्यक्तिको तस्बिर संलग्न गराइएपछि घटनाले नयाँ रूप धारण गरेको छ । मृतकका परिवारले आरोपीलाई उन्मुक्ति दिनका लागि प्रहरीले प्रमाण नष्ट गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । मिसिलमा अर्कै व्यक्तिको तस्बिर टाँसिएको जानकारी पाएलगत्तै आफन्त तथा स्थानीय छिमेकीले उर्लाबारीस्थित इलाका प्रहरी कार्यालयअगाडि आइतबार र सोमबार प्रदर्शन गरे ।
श ङ्कास्पद मृत्यु भएका प्रवीण बास्तोलाको अनुसन्धान गरिरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लावारीले मिसिल फाइलमा २ महिनापछि असम्बन्धित व्यक्तिको तस्बिर रहेको आफन्तले फेला पारेपछि प्रहरीविरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन् । इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीले इन्स्पेक्टर उद्धव पोख्रेलको नेतृत्वमा अनुसन्धान गर्दै आएको २ महिनापछि आफन्तले मिसिल फाइल हेर्न माग्दा अर्कै व्यक्तिको फोटो रहेको पाइएपछि परिवारसहित स्थानीय आन्दोलित भएका हुन् ।
सोमबार उर्लाबारी नगरपालिकाका प्रमुख खड्ग फागोले पनि पीडितको विपक्षमा अभिव्यक्ति दिएपछि स्थानीयले आलोचना गरेका छन् । नगर प्रमुख फागोले पी डितको विपक्षमा उ त्तेजक अ भिव्यक्ति दिएपछि स्थानीय आ क्रोसित बनेका थिए । प्रवीण गत पुस ५ गते मृत फेला परेका थिए । मृत्यु हुँदाको समयमा उनीसँगै रहेका संदिग्ध व्यक्तिहरूलाई प्रहरीले अनुसन्धान नगरी छाडेको आरोप लाग्दै आएको छ । यता प्रहरीले पनि फोटो भूलवश परिवर्तन भएको स्वीकार गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका डिएसपी लोकदर्शन थापाले गल्ती स्वीकार गरे ।
परिवारका अनुसार सुरुमा प्रहरीले दो षी प त्ता लगाउने आश्वासन दियो । तर, अहिले घटनाका आ’रो’पित सबैलाई छोडिदिएको छ । मृतकका बुबा प्रेमप्रसादले यो घटना क र्तव्य ज्या न हो भनेर दा’बी गर्ने आधार प्रस्तुत गर्दै भने, ‘पुस ४ गते घरबाट निस्किएको छोरा ५ गते ११ बजेतिर अ’ज्ञा’त नम्बरबाट फोन गरेर म-यो भनेर खबर आयो, यसबाट हामीले के बुझ्ने ?’ उनले प्रहरीले पनि आफूहरूलाई पटकैपिच्छे फरक–फरक जानकारी तथा सूचना दिँदै आएकाले पनि प्रहरीमाथि श ङ्का रहेको बताए । छोरा म-यो भन्ने थाहा पाए पनि परिवारले उनको शव चाहिँ उर्लाबारीको गोदावरी अस्पतालमा भेटेका थिए ।
‘त्यहाँसम्म प्रवीणलाई कसले ल्यायो भन्नेसम्म हामीलाई थाहा छैन’ –प्रेमप्रसादले भने । घटनामा जोडिएका पी डक भनिएकाहरू छाडिएपछि मृतक परिवारले सामाजिक सञ्जालमा प्रहरीप्रति आ क्रोस पोखेको थियो । यद्यपि परिवारले अस्पताल स्रोतलाई उद्धृत गर्दै भन्यो, ‘प्रवीणको मृत्यु भएको ३४ घण्टापछि मात्र एम्बुलेन्समा राखेर अस्पताल पु-याएको हो ।’
पी डित परिवारले किटानी जाहेरी दिन पटक–पटक प्रहरी कार्यालय जाँदा इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीका इन्स्पेक्टर उद्धव पोख्रेलले उल्टै थ र्काएको मृतक प्रवीणकी बहिनी दुर्गा बास्तोलाले बताइन् । ‘प्रमाण न ष्ट गर्ने र अ पराधीको संरक्षणमा प्रहरीकोे संलग्नता देखिन्छ’–दुर्गाले भनिन् ।
होटलमा रिकेश सिवा भनिने मेहरमान दर्जी, दीपेश पौडेल, राजेश रणपहेली र प्रवीण मात्र रहेको भनिए पनि त्यहाँ अरू केही व्यक्ति पनि भएको बास्तोला परिवारको दाबी छ । घटनामा संलग्नहरू कोही बिभिन्न कारोबारमा पटक–पटक प्रहरी हिरासतमा परेका र कोही मान्छे मा रे र फ रा र भएको पृष्ठभूमिका मानिस भएकोले यिनैले घटना घटाएको परिवारको आ रोप छ ।
अहिले सामाजिक सञ्जालमा मात्र होइन ठूला मिडियाहरुले पनि चासो दिएका छन् । उर्लावारीमा करिब २ महिना अघि निधन भएका प्रविण वस्तोलाको घटना थप र ह स्य म भएको । उनको वहिनी सदिक्षा वास्तोला जसलाई पुजा भनेर पनि चिनिन्छ, उनले प्रहरी कार्यालयवाट गरेको लाइभ भिडियोमा प्रहरीले मिसिलमा नक्कली तस्बिर राखेको कुरा प्रसारण गरीदिएपछि अहिले सो घटना चर्चामा आएको हो ।
प्रहरीले फाइलमै ग लत प्र माण राखेर आफ्नो दाईको ह त्या गर्नेहरुलाई प्रहरीले नै संरक्षण गरेको आ रोप प्रवीणको वहिनीको भनाई छ । उनले सो घटनाका बारेमा प्रहरीले नै छा नविन समिति गठन समेत गरिएको भएपनि आफुलाई त्यस बारेमा थाहा नभएको बताएकी छन् । बहिनि दुर्गा पेशाले पाइलट रहेको खुलेको छ । उनको फेसबुकमा राखेको तस्विर अनुसार श्री एअरलाइन्सको पाइलट रहेको देखिन्छ ।
रुकुम पछिको अर्को दर्दनाक घटनाः पानी भन्न नपाई सकियो ९ जनाको जिन्दगी! (भिडियो)